China Rwendo rwenhetembo – Rwendo rwekuQiandao Lake vagadziri uye vanotengesa | Mia Kugadzira
Musi waGumiguru 17th, vaaishanda navo kubva kudhipatimendi rebhizinesi rekutanga vakagadzirira kuenda kunzvimbo yakanaka yeKiandao, uye nguva yekufara yave kuda kutanga!
Mamiriro ekunze pazuva iri aive achizorodza zvikuru, uye zvinoyevedza munzira zvaive zvakanaka zvakare. Iyo emerald yakasvibira zvinomera uye zvivakwa zvakasiyana siyana zviri kure zvakagadzira mufananidzo wepanyama nedenga rebhuruu, izvo zvakaita kuti vanhu vanzwe zvirinani.
Mukuseka munzira, mushure mekufamba kweanopfuura maawa maviri, munhu wese akazosvika pamusha uyo wainge watonyorerwa. Imba iri kumahombekombe kweiyo yakanaka Qiandao Lake. Vhura hwindo uye iwe unogona kuona yakajeka nzvimbo yekunze, kutora mweya wekufema, uye geza mweya wako. Kune ma swing, masiraidhi, DIY matope uye zvimwe zvekuvaraidza kunze, uye vana vari kunakidzwa
Masikati ekutanga enzira iyi ndiyo inozivikanwa Tianyu Observation Deck. Iyo Tianyu Yekutarisa Deck iri paTianyu Mountain. Gomo harina kukwirira. Kukwirira kuri pakati pemamita 235 kusvika 310. Iyo ndiyo yepamusoro yekutarira chikuva cheQiandao Lake. Mushure mekubudirira kukwira kumusoro, wakamira pachikuva chekuona pamusoro peTianyu Mountain, ine simba re "kuve pamusoro pegomo uye kutarisa makomo". Nzvimbo yekutarisisa yakakwira pamusoro pegomo, iine kutarisisa uye kuona panoramic yenzvimbo dzakatenderedza, rwizi rusingaperi rweQiandao Lake Bridge, iro rakanyanya kunaka kuvira kwezuva kweQiandao Lake, uye iri rakasarudzika dziva uye makomo anoyevedza.
Yechipiri mira-Hongye Bay.
Hongye Bay ndeyePingfeng Scenic Area iri pakati pegungwa nzvimbo yeQiandao Lake Scenic Area. Iri pakati peXiaojinshan Peninsula neJinxian Islands, inozivikanwa seXiaojinshan. Chikamu cheiyo bay chakaita segirazi, iro gungwa rakajeka uye bhuruu, uye iwo maratidziro emakomo nemasango akajeka uye akajeka; zvitsuwa zvacho zvakamira uye zvakatwasuka, uye nzvimbo yacho yakapfuma, iine makomo marefu, mipata, nemateru, uye inonzi mvura maze
Pasina kuziva, nguva yakasvika manheru, uye denga rakanga richipenya. Wese munhu akatyaira achidzokera kuimba, uye hupenyu hunofadza hwehusiku hwakatanga!
Wese munhu akaungana akatenderedza sofa kuti aone mutambo, varaidzo uye chikafu, izvo zvaitaridzika zvakanaka kwazvo pahusiku huno hwekunaya.
Munguva pfupi yapfuura, bhaisikopo "My Hometown and Me" iri kuratidzwa nyika dzese. Pakati pavo, Fuwen Township Primary Chikoro chine dzimba dzakatenderedzwa negirazi inofadza vanhu venyika yese. Apa ndipo patinoenda zuva rinotevera.
Iyo murarabungu imba mumakomo inovanza hudiki ngano ngano zviroto. 26 mavara akapindirana. Imba yegirazi pamberi pako yave imba yekugara fairies. Girazi rinoonekera rakapendwa nemaroto anorota. Imba iri pasi pedenga rebhuruu inopenya uye yakanaka. Bvisa makore machena, uchisiya masango akasvibira kuti uaperekedze.
Muganhu muchena unoratidzira matumba nedzimba dzakarongedzwa zvine hunyanzvi. Shiri inomira paruzhowa, uye marosi ekukwira akanyarara akwira kumusoro kweseji. Maruva akakomberedza chikoro chepuraimari. Makona emusha akanaka. Iva gadheni diki.
Ndichitarisa chimiro chiri pasi, chakatambanudzwa uye ndokupfupika, kuyeuka nguva yandakanga ndichiri kuyaruka, yakazove isina kushushikana, uye rwiyo rwe "Little Boy" rwakarira munzeve dzangu, rwakanga rwakakodzera chaizvo chiitiko.
Munzira yerabha, tsangadzi zvishoma nezvishoma yakatora ruvara rwematsutso, uye shoma osmanthus yakatumbuka pamiti. Kana mhepo ikavhuvhuta, hwema hwacho hwakapfachukira kumusoro kwepamoyo. Ruvara rwekuvhuvhu rebindu rakanga rizere, uye madziro aisakwanisa kuvharwa. Kumadziro ekambasi, kwaive neIyo-yakapendwa-pendi pendi inoratidzira runako rwepanyama uye kuvanza kusava nemhosva kwevana kwevakuru.
Zvidimbu zvemavara eacrylic mapaneru zvinogona zvakare kugadzira chikoro chakakodzera mumoyo mako. Ndiani anoti zviroto zvinogona chete kuva zviroto. Kana zviroto zvikaoneswa muchokwadi, vanoona kuti nyika inogona kuve yakanaka kwazvo.
Maoko pamikova nemahwindo, tembiricha yechiedza yasara mugirazi, uye mimvuri iri pamahwindo egirazi inewo kupenya kupenya, makona emuromo anomutswa, uye nyika iri inoshamisa.
Rwendo rwunofadza kuQiandao Lake rasvika kumagumo. Rwendo urwu haruna kungosimbisa hukama pakati penhengo dzedhipatimendi, asi zvakare rwakabvumidza munhu wese kuti agamuchire rinotevera basa vaine mafungiro ari nani. Ngatirambei tichishanda nesimba uye tichienderera nerwendo runofadza gore rinouya